Wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya oo BBC-da uga warrantay khilaafka kala dhaxeeya Soomaaliya | Biyoguurenews.com
Home Wararka Wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya oo BBC-da uga warrantay khilaafka kala dhaxeeya...
Wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya oo BBC-da uga warrantay khilaafka kala dhaxeeya Soomaaliya
Waxaa laba isbuuc laga joogaa markii khilaaf diblomaasiyadeed uu soo kala dhexgalay dalaka Kenya iyo Soomaaliya oo ku muransan xadka badda.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya, Monica Juma oo wareysi gaar ah siisay laanta af Soomaaliga ee BBC-da aya waxay ka hadashay arrimo dhowr ah oo ay kamid tahay bal in ay hayaan caddeymo muujinaya in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay “xaraashtay ” shidaal ku jira dhul ay sheegtay inay leeyihiin.
“Ma aha maclumaad ay Kenya hayso ee waa xogta ay Soomaaliya ay hayso ee ay dunida u soo bandhigtay, waxaana magaalada Capetown looga dhawaaqay markii ay doonayeen inay xaraashaan xirmooyin shidaal oo ku yaalla badweynta Hindiya, kuwaasoo ay ku jireen xirmooyin ku yaalla dhulka kenya. Shirkii 7-dii Febraayo ee London wuxuu xaqiijiyey hadalkii dowladda Soomalaiya , sidaa darted ma aha akhbaarta ay Kenya hayso ee waa akhbaar ay Soomaaliya hayso, kaasoo aan ka dalbanay inay ka noqdaan” Ayay tiri Monica Juma.
Mar ay BBC-du wax ka weydiisay cunaqabateynada ay horay u shegeen ee ay Soomaaliya kusoo rogi karaan ayaa waxay tiri: “Wax kasta ayaan ka baaraan degaynaa, arrinta ugu horraysa ee aan ka baaraan degayno waxay tahay in aan Soomaaliya ka helno jawaab kala caddaynaysa arrimahan, sidaa awgeedna waxaan rajayanaynaa in aan jawaabtaas ayaga ka helno”. Ayay raacisay.
Inkastoo arrinta badda ay tahay mid hortaala maxkamadda cadaaladda adduunka ayaa haddana dowladad Kenya waxaa la aaminsan yahay in arrinta ay meel sare gaarsiisay, kadib markii ay u yeeratay safiirkii ka joogay Soomaaliya, midka Soomaalidana ku amartay in uu dib ugu laabta Muqdisho.
Waxaana soo baxeesay hadal heyn ah in Kenya aysan ku qanacsaneyn maxkamadda, waxaana aana wax ka weydiinay Monica Juma.
“Taariikhda Kenya ee ah inay u hogaansanto sharciga waa mid iyada is muujinaysa. Ma garanayo haddii uu jiro waddan dunida ku yaalla oo madaxweynihiisa iyo madaxweyne ku xigeenkiisa ay maxkamad tageen, mid maxalli ah ama mid caalami ah, sidaa awgeed marka la fiiriyo taariikhda aan dal ahaan u leenahay u hogaansanaanata isku xukunka sharciga waa mid is fasiraysa, ma jiraan dhib aan ku qabno. Xaqiiqdii waxaan xubin ka nahay Qaramada Midoobay oo waxaan ka mid nahay xubnihii asaaay maxkamaddan, si buuxda ayaanan ugu hogaansannay, taariikhdeenna ayaana muujinaysa”. Ayay ku jawaabtay.
Dowladda kenya sida muuqata waxay sheegtay inay diyaar u tahay go’aan walba oo ka soo baxa maxkamadda ICJ, hasayeeshee waxaa la isweydiinayaa sababta ay cadaadiska u saarayaan Soomaaliya, mar haddii ay shegeen inay ku qanacsan yihiin maxkamadda.
“Kuwaasi waa hadallo ka imaanaya tiro dad ah oo doonaya inay arrintan siyaasadeeyaan. Marka ugu horraysa waxaan u qoor dhiibannay nidaamka sharciga, welwelna kama qabo sababtoo ah xaqiiqooyin ayaan haynaa. Sidaasoo ay tahay, waxaan mar walba dareen sannahay inay jiraan nidaamyo murankan oo kale lagu xallin karo, kuwaasoo leh dhinacyo siyaasadeed mid dhaqan, dhaqaale iyo ganacsi oo heshiis lagu gaari karo, ayadoo aan cid dibadda ka ah loogu yeerin arrintan. Deris ayaan nahay, walaalo ayaan nahay. Waa suurtogal in aan arrimaheena xallisanno inagoon u yeerin qolyo dibadda nooga yimid inay hawshaas noo qabataan. Waa qodobkaas kan aan ku celcelinaynay haddii aan qalad la ii fahmin. Waxaan rumaysannahay isku xukunka sharciga. Teeda kale taariikhda marka dib loo raaco iyo caddaymaha, xagga sharcigaba waa dhinaceenna”. Ayay ku tiri wareysigii ay siisay BBC-da.
Marka dib loo milicsado arrinta maxkamadda, waa mid soo bilaabatay dhowrkii sano ee la soo dhaafay, waxaase halkaasi soo galeysa su’aal ah maxaa keenay in Kenya aysan marnaba arrinta soo hadal qaadin xiligii ay jirtay dowladdii dhexe ee Soomaaliya, balse ay usoo shaac baxday dhowrkii sano ee lasoo dhaafay.
Su’aashaasi ayaa wasiirka arrimaha dibadda waxaa weydiiyay weriyaha BBC-da Bashiir Maxamed Caato.
“Sababtu waxay tahay dhibba kama taaganayn, waxayana ila atahay in aad su’aashan weydiiso Muqdisho, waxa aynaan doonayn in aan noqonno waa in aan qayb ka noqonno siyaasadda gudaha ee Muqdisho, sidaa darted waxay ila tahay in su’aashaas ay marka hore Muqdisho ka jawaabto. Dawlad way ka jirtay. Dawlad adag baa ka jirtay, mana ahayn arrin uu muran ka taaganaa waayo doodba kama ataaganayn. Xaqiiqdii waxaad ogaan kartaa xataa markii ay soomaaliya ugu liidatay haddii ay nagu jiri laheyd fikrad dhul balaarsi ah wax badan ayaan samayn lahayn. Maranaba ma aynaan samayn. Waxaan ahayn ilaaliyaha ugu weyn Soomaaliya , sidaa darted waxay ila tahay in aad su’aashaas qudheeda weydiiso Muqdisho.
Monica ayaa waxay intaasi raacisay in muranka badda uusoo bilowday sannadkii 2014-ka, sidaa darted na arrinta ay tahay mid mar dhaw dhacday.
Waxaa kale oo ay sheegtay in arrintan aysan ahayn arrin horay dood uga tagneyd, dowladda Soomaaliya na aysan dhalinin arrin aan taagneyn.
Monica Juma ayaa sidoo kale mar ay BBC-du wax ka weydiisay saameynta arrintan ay ku yeelan karto ganacsiga labada dhinac, gaar ahaan jaadka ama qaadka ay Kenya geyso Soomaaliya ayaa waxay tiri: “Ma filayno, aad baan isku xakamaynay sida laga yaabo inaad ogtahay waxaanan filayaa in aysan saamayn kale yeelan doonin. Xiriirka aan Soomaaliya la leenahay waa mid dhinacyo badan leh, balse is xakamaynteenna ma aha in loo qaato daciifnimo”.
Monica ayaa markale ku celisay in wali jawaab waafi ah ay ka sugayaan dowladda Soomaaliya.
Previous articleDawlada federaalka ah ee soomaaliya ayaa ka hadashay weeraro ka dhacay magaalada Muqdisho.
Next articleMasuuliyiin Ka Tirsan Xisbiga Waddani Oo Is Casilay + Sababta.